Dzidza Forex Kutanho Nhanho nedanho, Forex kutengeserana kwevanotanga Gadziriso 2020
forex basics nyaya
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - forex basics nyaya - Dzidza Forex Kutengesa nhanho nedanho
Ko forex inoshanda sei? Basic zvinodiwa zvekutengesa Forex Matanho mukutengesa kwe Forex
Kusarudza broker chaipo
Dzidza mazwi akakosha
Vhura account demo
Sarudza software yekutengesa
Sarudza joera yemari
Edza dzimwe nzira dzekutengesa
Forex Kutengesa FAQ mhedziso
Pakati pezvakawanda zvekuisa zviridzwa, Forex kutengesa inzira inoratidzika yekuwedzera mari yako nyore. Sekureva kweye 2019 Triennial Central Bank ongororo yakaitwa neBank for International Settlement (BIS), nhamba dzakaratidza kuti Kutengesa mumisika yeFX yaisvika madhora mazana matanhatu nemazana matanhatu ezviuru pazuva muna Kubvumbi 6.6, zvichikwira kubva pamadhora mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora apfuura.
Asi zvese izvi zvinoshanda sei, uye unogona sei kudzidza forex nhanho nhanho?
Mugwaro iri, tiri kuzogadzirisa mibvunzo yako yose nezve forex. Saka, ngatitangei.
Ko forex inoshanda sei?
Kutengeserana kwe Forex hakuitika mukutsinhana senge zvigadzirwa nemasheya, asi zviri pamusika-we-counter apo mapato maviri anotengesa zvakananga kuburikidza neabroker. Musika we forex unoshanda kuburikidza netuweki yemabhangi. Iwo makuru mana ekutengesa ekutanga einternet ndiNew York, London, Sydney uye Tokyo. Unogona kutengesa kwemaawa makumi maviri nemaviri pazuva kubva Muvhuro kusvika Chishanu. Iko kune matatu mhando dzemisika ye forex inosanganisira nzvimbo yemusika forex, remangwana forex musika uye mberi forex musika.
Vazhinji vatengesi vanofungidzira pamutengo we forex havazoronga kutora kuendesa kwemari pachayo; pachinzvimbo ivo vanofungidzira kuchinjanisa kuchinjika kutora mukana wekufamba kwemitengo mumusika.
Vatengesi ve Forex vanogara vachifungidzira pamusoro pekukwira kana kudonha kwemitengo yemari joiri kuti uone purofiti.Muenzaniso, mitengo yekutsinhana kune EUR / USD pairshows mutengo wepakati pakati peEuro neUS dollar. Inomuka kubva kuhukama pakati pekugovera uye kudiwa.
Zvekutanga zvinodikanwa zvekutengesa kwe forex
Wakatokwanirisa zvinyoro zvakakosha zvekutora chikamu mu Forex kutengeserana kana iwe uine kombiyuta uye internet kubatana.
Iye zvino zvauinako kuziva-sei kwemusika we Forex ngatifambire mberi kune kuti ungadzidza sei Forex kutengesa nhanho nhanho.
Matanho mukutengeserana kwe forex
Usati watanga kutengesa chaiko, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kufunga nezvazvo. Aya matanho chikamu chikamu chako kudzidza.
1. Kusarudza broker chaipo
Kusarudza broker chaipo ndiyo inonyanya kukosha danho rekutengeserana kwe forex sezvo iwe usingakwanise kuita online yekutengesa pasina broker uye kusarudza broker asina kunaka kunogona kupedzisira kwasviba chaizvo mubhizinesi rako rekutengesa.
Iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti broker inopa zvakachipa mitengo, yakanakisa mushandisi interface, uye pamusoro pezvose, demo account.
With the demo account, unogona kuona kana broker akakukodzera kana kwete. Iyo zvakare inoita kuti uedze uye inonatsa yako Forex nzira.
Kana mumwe munhu achida kukupa chimwe chinhu kana kuti achida kuchipa pamamiriro ezvinhu asina kunaka, iwe unofanirwa kunge uchifungidzira. Iwe unonyatsorayirwa kutendeukira kune imwe yemapuratifomu akasimbiswa anotongwa nevane simba enyika dzawo kubva.
2. Dzidza mazwi akakosha
Iwe unofanirwa kudzidza chaiwo mazwi ekutengesa usati watanga rwendo rwako. Aya ndiwo mavara aunofanira kuedza kunzwisisa.
Chiyero chinoratidza iye zvino mutengo wemari joiri.
- Mutengo weBid
Ndiwo mutengo unopihwa neFXCC (kana imwe bato yekupikisa) kutenga iyo jozi yemari kubva kune mutengi. Ndiyo mutengo unozotorwa nemutengi kana uchida kutengesa (enda pfupi) chinzvimbo.
- Bvunza mutengo
Ndiyo mutengo unowaniswa mari, kana chimbo chinotengeswa neFXCC (kana rimwe bato rinopesana). Iko kubvunza kana kupa mutengo kwakanyatso mutengo unozoiswa mutengi paunenge uchida kutenga (enda refu) chinzvimbo ..
- Mari yemaviri
Mari inogara ichitengeswa vaviri vaviri, semuenzaniso, EUR / USD. Mari yekutanga ndiyo base base currency, uye chechipiri ndeye quote currency. Izvi zvinoratidza kuti yakawanda sei yemari yemari inofanirwa kutenga base base currency.
Musiyano uripakati pekudaidza uye kubvunza mutengo unonzi kupararira.
Maitiro ekuongorora zvazviri machati kufungidzira kuti ndeipi nzira iyo musika ichaenda inotevera.
- Commission / fizi
Iyo ndiyo mari inobhadhariswa broker yakadai seFXCC inogona kubhadharisa pane kutengeserana.
- Kurongeka kwemusika
Iko kurongeka kwemusika kunoenderana nemutengo uripo wakamiswa nemusika. Kana iwe ukapa yakadaro kutenga kana kutengesa oda, iwe unozokwanisa kusvika kune kutengesa nekukurumidza sezvinobvira.
- Ganhurira kurongeka
Chiyero chebhokisi chinogonesa mutengesi kuseta muganho wemutengo kumusoro uko mapepa emari anotengwa kana kutengeswa Izvi zvinobvumira kuronga kutengeserana mamwe matanho emitengo uye kudzivirira kuwedzera kwakawanda mitengo yekutengesa kana kutengesa mitengo yakachipa zvakanyanya.
- Stop-kurasikirwa kurongeka
Neyemira-kurasikirwa kuraira, mutengesi anogona kudzikisira kurasikirwa kutengeserana kana mutengo ukaenda kwakatarisana. Iyo yekuraira inomiswa apo mutengo wepakati wemari unosvika kune imwe mutengo wedanho. Iye mutengesi anogona kuisa kumira-kurasikirwa paunenge uchizarura kutengeserana kana inogona kuiswa kunyange mushure mekuvhura kutengeserana. Iyo yekumira-kurasikirwa kurongeka ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekugadzirisa njodzi.
Kusimudzira kunoita kuti vatengesi vatengese zvihombe zvihombe pane izvo zvinotenderwa capital capital. Mikana inogona kuwanikwa ichiwanda, asi njodzi dzinowedzerawo zvakanyanya.
Panguva yekutengesa forex, vatengesi vanongodikanwa chikamu chidiki chemuzinda kuvhura uye chengetedza nzvimbo yekutengesa. Ichi chikamu che capital chinonzi margin.
Pip chinhu chakakosha chikamu mukutengesa kwe forex. Iyo inoratidza shanduko mumutengo wepari yemari. Pombi inoenderana neshanduko yechidzidzo che0.0001.
Zvakawanda zvinoreva zviuru zana zvemari yekutanga mukutengeserana kwe forex. Vanobhangi vemazuva ano vanopa mijenya yemhando gumi nezviuru gumi uye zvikamu zvidiki zvine zviuru zvezviuru kune vatengesi vane yakadzika mari
- Exotic mapara
Mapudzi epamwe chete haana kutengeswa kazhinji seaya “majors”. Panzvimbo iyoyo, iwo asina kusimba mari, asi anogona kusangana pamwe EUR, USD, kana JPY. Nekuda kwehurongwa hwemari husina kugadzikana, mari dzakadaro dzinowanzo kuve dzakawandisa kupfuura mahombekombe akagadzikana.
Vhoriyamu ndiyo huwandu hwakazara hwekutengesa chiitiko cheimwe mari yemari. Dzimwe nguva zvinotarirwawo sehuwandu hwehuwandu hwezvibvumirano zvinotengeswa mukati mezuva ..
- Enda kwenguva refu
"Kuenda refu" zvinoreva kutenga peta yemari uchitarisira kukwira kwemutengo weiyo mari yepamberi. Iyo yekuraira inova inobatsira apo mutengo unokwira pamusoro pemutengo wekupinda.
- Enda kupfupi
Pfupi jozi yemari zvinoreva kuti unotarisira kuti mutengo wemari vaviri uchadonha. Iyo yekuraira inova inobatsira apo mutengo unowira pasi pemutengo wekupinda.
- Hapana kuchinjanisa maakaundi
Isina account yekushandura, broker haabhadharisi mari yekubhururuka pakubata chero nzvimbo yekutengesa usiku.
- Akaundi account
Iyo online forex broker ikozvino inopa marudzi ese emaakaundi. Kana iwe usina zvakakosha kana zvaunoda, chengetedza yakajairwa account.
Iyo mini account inobvumira vatengesi ve forex kutengesa mini-mijenya.
- Akaundi diki
Akaundi diki inobvumidza vatengesi vemadhiza ekutengesa micro-mijenya.
- Mirror kutengesa
Mirror kutengeserana inobvumira vatengesi kungoerekana vatengesa zviitwa zvevamwe vatengesi vanobudirira kupokana nemari yakati.
Musiyano pakati pemutengo chaiwo wekuzadza uye unotarisirwa kuzadza mutengo unonzi slippage. Izvo zvinotsvedza zvinowanzoitika kana musika wakasununguka zvakanyanya.
Scalping ndiyo pfupi-yenguva yekutengesa maitiro. Iyo nguva pakati pekuvhura nekuvhara kwekutengeserana inogona kusiyana kubva pamasekondi mashoma kusvika kumaminitsi mashoma.
3. Vhura account demo
Isu tinokurudzira demo account iyo yaunogona kuedza kunze kwekutengeserana kwe forex pasina njodzi. Saka, iwe unogona kuwana yako yekutanga FX chiitiko pasina njodzi.
Iyo demo account inoshanda seaka chaiyo account ine mashoma functionalities. Pano iwe une mari chaiyo yaunogona kushandisa kutengesa.
4. Sarudza software yekutengesa
Vamwe broker vanopa yavo yega yekutengesa webhu saiti apo vamwe FX broker vanokupa iwe nehunyanzvi software kana app. Mazhinji mabroker anotsigira anozivikanwa MetaTrader kutengesa plaform.
Kana iwe ukashandisa internet kuburikidza neisina kujairika bhurawuza, iwe unofanirwa kufungidzira kuti FX broker yako haitsigire iyo. Kuti uchinge uchikwanisa kutengeserana neBroker broker, iwe uchafanirwa kushandisa app mune ino kesi - kana kuisa imwe yakajairika mabhurawuza pakombuta yako.
5. Sarudza joera yemari
Forex anotengesa anoitwa mukati mari maviri chete. Iwe, saka, iwe unofanirwa kusarudza kuti ndeipi mari yekudyara mairi. Sekutonga, majors uye vana vanowanikwa. Iwo akakurumbira emari pairs zvimwe EURUSD, USDJPY, uye EURGBP.
6. Edza dzimwe nzira dzekutengesa
Iyo yakabatana forex zano inosanganisira zvinhu zvina:
yakatsanangurwa kupinda chiratidzo
kubuda kubva kutengeserana.
Sarudza nzira yekutengesa inokodzera iwe zvakanyanya.
Heano mamwe eakajairwa zvokutengeserana nzira:
Mune inonzi "scalping," zvinzvimbo zvinomhanya zvakanyanya kwenguva pfupi kwazvo. Semutemo, ivo vanovhara kutengeserana mukati memaminitsi mashoma ekuvhurwa kwavo. Vatengesi vanogutiswa nemari yepasi pese pakutengeserana kana scalping. Kudzokorora kusingagumi kunogona kutungamira pakudzoka kwakanyanya munguva refu.
- Kutengesa kwezuva
Mukutengesa kwezuva, trades yakavhurwa uye yakavharwa mukati mezuva rimwe. Iye mushambadzi wezuva anoedza kuwana kubva kushomani-pfupi kusimukira mumusika wakasimba kwazvo we forex.
- Swing kutengesa
Swing kutengeserana inzira yepakati yekutengesa nzira uko vatengesi vanobata zvigaro zvavo kubva pamazuva maviri kusvika kumavhiki akati wandei uye ivo vanoedza kuwana upfumi hwakawanda kubva pane hunhu.
- Chinzvimbo Kutengesa
Mukutengesa chinzvimbo, vatengesi vanoteedzera kwenguva yakareba maitiro ekuziva iyo yakakwana mikana kubva kune mutengo kufamba.
Forex Kutengesa FAQ
Izvo zvakakodzera kuisa mari mu Forex?
Sezvinei nechero ipi odhi, pane nguva dzose njodzi yekurasikirwa kana uchitengesa Forex. Iwe unofanirwa kuseta yakanakira yekutengesa forex inoenderana neako ako ekutengesa maitiro. Vaya vanoisa mari nekuchenjera vanogona kuwana yakakwira kudzoka kubva kune Forex kutengesa.
Ndeipi yepuratifomu yakanakisa yekutengesa kwe forex?
Kusarudzwa kwepuratifomu kwakanyanya kuita uye kunoenderana nezvinodiwa pakutengesa. Mamwe emapuratifomu anozivikanwa ekutengesa Forex anosanganisira MetaTrader 4 uye MetaTrader 5. Haasi ese matanho ekutengesa akasununguka kunyange. Kunze kwekubhadhara kwemwedzi nemwedzi, mamwe mapuratifomu anogona kunge akapararira zvakanyanya.
Zvakaoma sei kubudirira mukutengesa forex?
Hapana mubvunzo kuti zvinotora maitiro mazhinji kuita mari nekutengesa kwe forex. Kuwedzera pakusarudza yakakodzera mari joera, kurovedza nguva dzose kwakakosha kuti uve mutengesi anobudirira forex.
Pamhepo online kutengeserana kunovimbisa yakakura anodzorera kune vanoisa mari asi inoda yakawanda kubva kwavari. Chete ivo avo vakagadzirira kugadzirira pamhepo yekutengesa online zvakanaka uye kubata zvakanyanya neinternet nzira dzekutengesa forex dzinofanira kupinda mumusika we forex.
Nawo matipi akurukurwa pamusoro apa, iwe wakagadzirira chaizvo kuva neyako yekutanga forex ruzivo uye pakupedzisira unogona kutanga kudzidza kutengeserana kwe forex.